Lovers ushokoledi kophudingi ziyazi ukuthi kukhona amashumi ngisho namakhulu zokupheka ezahlukene amaqebelengwane ushokoledi. Cishe wonke umuntu wesifazane okungenani kanye, kodwa kuphekwe iyisibiliboco esimnandi like chocolate cake, usebenzisa iresiphi owaziwa, noma "ukuziqambela" okuthile okukhethekile.
Kufanele ukuthi kukhona namakhekhe ushokoledi, okuyinto won ngempela udumo emhlabeni. Ngokwesibonelo, Austrians bakholelwa ukuthi esiphundu kunazo ushokoledi ikhekhe - kuyinto dessert eyaziwa ngokuthi "Sacher". Lokhu ikhekhe yaqale washayelwa emuva 1832 Frantsem Zaherom, owayeyisiboshwa osafunda nje e khekhe saseVienna. It wawuhloselwe Crown Prince Metternich, owayefuna ukuzama into engavamile. Eliphekiwe ikhekhe njengawo highness yakhe, ukuthi kwaba uju esithandayo. Futhi kamuva, ukunambitheka le dessert izinyo elimnandi futhi baziswa emhlabeni wonke.
Kumele kuthiwe "Sacher" ikhekhe recipe manje abaningi abawazi, kodwa ngasizathu simbe, le dessert akuyona njalo kuvela ngakho okuhle njengoba e confectionery Austria. Kungani lokhu kwakwenzeka? Iqiniso liwukuthi ukuze ukupheka okumnandi ngempela chocolate cake, iresiphi of onikelwa ngezansi, kubalulekile ukukhetha imikhiqizo efanele.
Okokuqala, kudingeka ufulawa nge okuqukethwe fiber eliphezulu. Okwesibili, kubalulekile ukusebenzisa "kwesokudla" ushokoledi, kufanele kube khona ubisi, futhi inguqulo ebuhlungu okukhona okuqukethwe ephakeme kakhulu cocoa. Okwesithathu, udinga kuhhavini ikhekhe ezingeni lokushisa ethile, futhi ngaphansi kwaziphi izimo musa ukuvula umnyango iKhabhinethi ngaphambi kokuphela of baking. By endleleni, lokhu wabhaka likhekhe ushokoledi isikhathi eside, cishe isigamu sehora. Nokho, isikhathi esiqondile incike izici kuhhavini.
Ngesisekelo ikhekhe - ikhekhe sponge, kungafanele zisebenzisa baking powder, ikhekhe ubukhazikhazi ukuthi ibangelwa kuphela ngokusebenzisa amaqanda washaywa iresiphi yasekuqaleni, ngakho-ke lesi sinyathelo ukulungiselela kufanele inikwe ukuqashelwa okukhethekile.
Futhi isimo lokugcina impumelelo - ukusetshenziswa yemvelo ibhilikotsi marmalade, ukwenziwa kuphela of amabhilikosi sesivuthiwe futhi ushukela, ngaphandle kokusebenzisa gelling ejenti, flavorings kanye colorings.
Ngakho, iresiphi zangempela. Ukulungisa bhisikidi ushokoledi, thatha amaqanda 10 usayizi Ngokwesilinganiso, owayesanda nje asuswe esiqandisini, 350 amagremu ushukela oluyimpuphu, okuyinto ingenziwa ushukela okwejwayelekile, usebenzisa grinder. Okulandelayo udinga ukuthenga nesigaxa ushokoledi stogrammovuyu, ikhwalithi okuyinto kushiwo ngenhla. Futhi kudingeka 160 amagremu kafulawa, a brandy kancane futhi 50 amagremu ibhotela (akulula!).
Okokuqala udinga Ncibilikisa chocolate, ngoba lokhu kufanele usebenzise okugeza amanzi. Manje seqa amaqanda ibe isitsha bese uqale ukushaya. Ngo zokupheka kakhulu kuphakanyiswa ukwehlukana izikhupha nabamhlophe, kodwa ukuze uthole ikhekhe omangalisayo ngempela phehla ndawonye kangcono. Whisking kuthatha isikhathi eside, okungenani imizuzu engu-20. Khona-ke ungakwazi ukwengeza izithako esisele kuze ekuqedeni ufulawa. ukuxubana okuhle bonke, ngokuqhubeka uphehle mixer mass. Manje ungakwazi ukwengeza ufulawa kodwa kube isikhathi eside ukusetshenziswa mixer akudingekile. Kwenze kaningi, isikhathi ngasinye sibhebhezela ngesipuni, okwenza ukunyakaza kusukela phansi kuze.
Kuhhavini kufanele sekuqala ukufudumala, izinga lokushisa lapho besanda kuqala baking - degrees 200. Thina shift inhlama ibe isikhunta wafaka kuhhavini. Ngemuva kwemizuzu engu-15 of baking kuyodingeka ukwehlisa izinga lokushisa degrees 160 bese uqhubeke ngenqubo.
bhisikidi Ready kumele ushiye ekamelweni lokushisa ngosuku. Khona-ke isipanji ikhekhe is unciphe ngesigamu crosswise. Bobabili neengcezu kuthiwa elifakwe isiraphu, ushukela okuphekiwe, amanzi, ugologo. Khona ungqimba engezansi ikhekhe ezigcotshwe ibhilikotsi marmalade, phezu okuyinto wabeka i ikhekhe engenhla.
Phezu ushokoledi yethu ikhekhe wathela nge uqweqwe lukashukela, okuyinto eyenziwe ushokoledi (ebabayo), ukhilimu amafutha okusezingeni eliphezulu ne bhotela.
ikhekhe Kunikezwe "Sacher" ne ophehliwe, okuyinto lamapulangwe ipuleti eduze nocezu lesi sidlo.
Imidlalo zokufundisa izingane 10 izinyanga yendlu